Kristianisma ao Madagasikara - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fiangonana ao Madagasikara)
Fiangonana katolika ao Antsirabe
Ny kristianisma ao Madagasikara dia iray amin'ireo fivavahana arahin'ny mponin'i Madagasikara, indrindra ny Malagasy, ankoatry ny fivavahan-drazana sy ny finoana silamo sy ny hafa koa. Ny 41%n'ny Malagasy dia Kristiana, araka ny tatitry ny US Departement of State tamin'ny taona 2011 na 85% araka ny tatitry ny Pew Research Center tamin'ny 2010. Hita avokoa ireo sampan'ny fivavahana kristiana toy ny Fiangonana nohavaozina sy ny Fiangonana loterana sy ny Fiangonana katolika sy ny Fiangonana adventista sy ireo Fiangonana evanjelika tsy mitsaha-mihamaro. Miezaka ny hampitombo isa ny fiangonany ny Ortodoksa sy ny Anglikana sy ny hafa koa. Tamin'ny taona 1963 hatramin'ny 2004 dia niisa 72 ny "fikambanana ara-pinoana" voasoratra ao amin'ny lisitra ofisialy tanan'ny fanjakana malagasy. Manodidina ny 200 any ho any ny isan'ny karazam-piangonana eto Madagasikara ka ny ankamaroan'ireo dia fiangonana vao niorina taty afara, dia ireo fiangonana evanjelika na ara-pilazantsara sy pentekotista.
1 Tantaran'ny Kristianisma eto Madagasikara
1.1.1 Fidiran'ny fivavahana kristiana
1.1.3 Ny protestantisma lasa fivavaham-panjakana
1.1.4 Fidiran'ny fivavahana katôlika
1.2 Tamin'ny fanjanahan-tany
1.2.1 Fahazoan'ny Katôlika vahana
1.2.2 Fitomboan'ireo antokom-pivavahana kristiana
1.2.3 Fanafahana an'i Madagasikara
1.3.3 Firoborobon'ny evanjelisma
1.3.4 Fandraisan'anjaran'ny Fiangonana amin'ny raharaham-pirenena
2.1.1 Ny Fiangonana katôlika
2.2 Ny protestantisma
2.2.2 Ny kalvinisma
2.4 Ny evanjelisma sy ny pentekotisma ary ny karismatika
2.5 Ny Vavolombelon'i Jehovah sy ny Olomasin'ny Andro Farany
2.5.1 Ny Vavolombelon'i Jehovah
2.5.2 Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany
3.1 Ireo fiangonana ao amin'ny FFKM
4 Ny kristiaisma sy ny finoana hafa eto Madagasikara
Tantaran'ny Kristianisma eto Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
Fidiran'ny fivavahana kristiana[hanova | hanova ny fango]
Ireo misionera avy amin'ny London Missionary Society (LMS) no nahomby tamin'ny fampidirana voalohany ny fivavahana kristiana tamin'ny taona 1818 ka ny protestantisma izany, na dia efa nitondra ny fivavahana katolika aza ireo vazaha nandalo taty Madagasikara tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-16. Tamin'ny nidiran'ny fivavahana kristiana teto Madagasikara dia tao anaty fanompoan-tsampy ny Malagasy, indrindra ny tao amin'ireo lapan'ny mpanjaka, ka singanina manokana ny tao Imerina. Tsy mbola nisy anefa ny fanenjehana ny kristianisma satria ny fandrosoana nentin'ireo misionera no navesa-danja tamin'ny mpanjaka. Nampiely ny protestantisma sady nampianatra literatiora tamin'ny alalan'ny Baiboly voadika amin'ny fiteny malagasy ireo misionera ireo tao amin'ny sekoly naoriny tao afovoan-tany araka ny fanirian'ny mpanjaka Radama I. Tamin'ny taona 1830 no vita dika amin'ny teny malagasy ny Testamenta Vaovao. Tamin'ny taona 1835 dia vita dika amin'ny teny malagasy ny Baiboly iray manontolo.
Tamin'ny voalohany dia ambany ny isan'ireo izay niova ho Kristiana nefa nitombo tsikelikely izany na dia nisy aza ny fanenjehana tamin'ny andron'ny mpanjakavavy Ranavalona I. Novonoina ho faty na nampisotroina tangena izay tratra mitazona Baiboly .
Fatra-pifikitra amin'ny fanompoan-tsampy ny mpanjakavavy ka nanenjika mafy ny Kristiana sy nandroaka ny misionera ary nandoro ny Baiboly. Tamin'ny taona 1831 dia voarara ny fananana Baiboly sy ny fivavahana kristiana. Tamin'izany fotoana izany no nampisy ny Kristiana malagasy maty martira voalohany ka isan'izany Rasalama (taona 1837). Nanahy mantsy ilay mpanjakavavy sao mahavery hasina ny sampy sy ny razana ny fivavahana amin'ny razam-bazaha. Tsy nankasitrahany koa ny fitoriana ny fitovian'ny samy olombelona izay manohintohina ny rafitra ara-politika sy ara-toekarena izay niorina amin'ny fisian'ny olona sokajina ho andevo. Tsy nekeny hotonga Kristiana ny miaramilany. Hatramin'ny sekoly naorin'ireo misionera dia tsy azoazony fa ataony hoe "misoko olona". Tamin'ny taona 1849 no tena nafana ny fanenjehana ka ao ny nodorana velona, ny notapahin-doha sy ny navarina tao Ampamarinana.
Ny protestantisma lasa fivavaham-panjakana[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny fitondran-dRadama II (nanjaka tao anelanelan’ny taona 1861 sy 1863) sy Rasoherina (nanjaka teo anelanelan’ny taona 1863 sy 1868) dia niverina nalalaka indray ny fivavahana kristiana sy ny famakiana Baiboly. Nanome fahalalahana ny finoana isan-karazany teo amin'ny fanjakany Radama II. Rasoherina (nanjaka tao anelanelan’ny taona 1863 sy 1868) moa dia lasa Kristiana ka nampandoro ny sampim-panjakana sy nanao ny fivavahana kristiana ho fivavaham-panjakana. Maro noho izany ireo tao an-dapa sy ireo olona ao amin'ny saranga ambony tao Imerina niova ho Kristiana nefa ny ankamaroany dia lazain'ny mpahay tantaram-piangonana fa "nanao rebik'ondry".
Tonga teto tsy nisy mpanakantsakana ny misionera protestanta anglisy tao amin'ireo fikambanana toa ny Misiona anglikana, dia ny Church Missionary Society sy ny Society for the Propagation of the Gospel izay tonga taminny taona 1864; ny Misiona loterana norveziana, dia ny Norvegian Missionary Society (norveziana: Norsk Misjonsselskap) tamin'ny taona 1866; ary ny Misiona frenjy, Friends of Foreign Mission Association tamin’ny taona 1867.
Ny fielezan'ny protestantisma teo amin'ireo Merina saranga ambony teo antenantenan'ireo taona 1800, isan'izany ny mpanjaka Ranavalona II (izay namoaka didy momba ny famerenana ny fivavahana kristiana sy natao batisa tamin'ny taona 1869), niaraka tamin'ny fitomboana ara-politikan'ireo misionera britanika, dia nitarika ny praiminisitra Rainilaiarivony hamoaka didy nahatonga ny Kristianisma ho fivavahana tao an-dapa, fivavaham-panjakana. Izany no nanafaingana ny fiovam-pinoan'ny vahoaka tany afovoan-tany ho amin'ny protestantisma tamin'ny faramparan'ireo taona 1800.
Fidiran'ny fivavahana katôlika[hanova | hanova ny fango]
Ny Fiangonana katolika romana dia tafiditra teto Madagasikara tamin'ny alalan'ireo masoivoho sy misionera frantsay tamin'ny tenantenan'ny taonjato faha-19, nefa tsy nitombo ny isan'ny mpanaraka azy raha tsy tamin'ny fanombohan'ny fanjanahan'ny Frantsay an'i Madagasikara tamin'ny taona 1896.
Tamin'ny fanjanahan-tany[hanova | hanova ny fango]
Fahazoan'ny Katôlika vahana[hanova | hanova ny fango]
Lasa zanatanin'i Frantsa i Madagasikara tamin'ny taona 1897 nefa tsy nanohana ny misiona katolika i Galliéni (nanapaka an'i Madagasikara tamin'ny taona 1896-1905) na dia tsy nanavakavaka fivavahana. Amin'ny ankapobeny anefa dia nahazo vahana ny katôlisisma ka somary sahirana noho ny fanenjehana ny Prôtestanta. Sahirana ny Protestanta tamin'ny fotoana nanombohan'ny fanjanahan-tany noho ny nataon'ireo Zezoita (frantsay: Jésuites) izay nampifangaro ny raharaha politika sy ny raharaham-pivavahana ka nanao ny Protestanta ho sakaizan'ny Anglisy sy ho fahavalon'ny Frantsay. Maro ireo mpino protestanta niala amin’ny fiangonany noho ny tahotra. Fotoana nisian'ny tsy fifanarahan'ny Protestanta sy ny Katôlika malagasy izany. Tamin'ny nanapahan'ireo governora manaja ny maha fanjakana laîka an'i Frantsa vao niverina nalalaka indray ny safidy momba ny fivavahana. Naverina tamin’ny Protestanta ihany izy ireo taty aoriana afa-tsy ny fiangonana tao amin'ny faritr'Ambatomanga. Tamin'ny taona 1938 no nahavitana printy ny Baiboly katolika voalohany amin'ny teny malagasy.
Fitomboan'ireo antokom-pivavahana kristiana[hanova | hanova ny fango]
Tonga teto Madagasikara ny misionera adventista tamin'ny taona 1926 ary tafa tafaorina teto Madagasikra ny Fiangonana adventista tamin'ny taona 1927. Tamin'ny taona 1930 dia tafaorina teto Madagasikara koa ny Fiangonana ôrtôdôksa. Efa nahatsangana ny sinodany ny fiangonana anglikana tamin’ny taona 1937.
Fanafahana an'i Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
Nandray anjara betsaka ny Kristiana tamin'ny fanafahana an'i Madagasikara amin'ny fanjanahan-tany. Nisongadina tamin'ny fanoherana ny mpanjana-tany ny Protestanta. Ireo avara-pianarana malagasy, indrindra ny mpitsabo sy ny pastora, dia nivondrona tanaty fikambanana talohan'ny taona 1920, dia ny Vy, Vato, Sakelika (VVS). Protestanta ny ankamaroany.
Tamin'ilay raharaha 1947 dia maro ny Kristiana malagasy (indrindra ny Protestanta) no nampangaina ho niray tetika tamin'ny mpanohitra ny fanjakana frantsay. Tetsy an-daniny koa dia niampanga ny Kristiana ho mpiray tsikombakomba tamin'ny Vazaha ny fikambanana mpanafaka tanindrazana Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache (MDRM) izay nanimba sy nandroba ny trano fiangonana tamin'ny faritra sasany teto Madagasikara.
Taorian'ny nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tena koa no nandraisan'ny Malagasy ny fitantanana feno ny fiangonana na dia tsy afa-niala tamin'ny fanjohanana avy any ivelany izany fiangonana izany. Nahazo fahaleovan-tena tamin'ny taona 1950 ny Fiangonana Loterana Malagasy. Tamin'ny taona 1968 dia tonga Fiangonana iray nomena ny anarana hoe Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) ny fikambanan'ny fiangonana telo nohavaozina, dia ny Fiangonana Frenjy Malagasy sy ny Fiangonana ara-Pilazantsara eto Madagasika ary ny Fiangonan'i Kristy eto Madagasikara. Niforona koa ny fiangonana anglikana, dia ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM) tamin’ny taona 1969.
Tamin'ny vanim-potona nanjakan'ny firehana politika kômonista tamin'ny firenena maro dia nisy ny tsy fankasitrahan'ny mpitondra fanjakana ny fivahana kristiana teto Madagasikara.
Firoborobon'ny evanjelisma[hanova | hanova ny fango]
Taorian'ny nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tena, indrindra fa teo amin'ireo taona 1990, no nanombohan'ireo fiangonana evanjelika sy pentekotista niditra teto Madagasikara
Fandraisan'anjaran'ny Fiangonana amin'ny raharaham-pirenena[hanova | hanova ny fango]
Ankehitriny dia mandray anjara lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena malagasy ny fivavahana kristiana, na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny fanabeazana na ara-politika, ary tsy manavaka saranga na fiaviana ny fidirana ho mpikambana amin'ny antokom-pinoana izatsy na izaroa.
Ny Fiangonana katôlika[hanova | hanova ny fango]
Ny Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina eto Madagasikara, izay niorina tamin'ny taona 1857, dia isan'ny Fiangonana katolika maneran-tany izay eo ambany fitarihana ara-panahin'ny Papa ao Roma. Fivavahana voalohany eto Madagasikara ny Fiangonana katôlika raha ny habetsahan'ny mpino no jerena, izay mahatratra maherin'ny 4.000.000 any ho any, izany hoe iray ampahefatry ny mponin'ny Nosy.
Ny Fiangonana Ortôdôksa eto Madagasikara dia fiangonana isan'ny Fiangonana tatsinanana efa tafasaraka tamin'ny Fiangonana Katôlika tany aloha. Fehin'ny Fiangonana Ôrtodôksan'i Aleksandria sy Afrika manontolo izy. Tamin'ny taona 1930 no niorina voalohany teto Madagasikara ny Fiangonana ôrtodôksa.
Ny anglikanisma eto Madagasikara dia hita amin'hy alalan'ny Eklesia Episkopaly Malagasy, hafohezina amin'ny hoe EEM. Miombona ao amin'ny Firaisambe anglikana na Fiombonam-be anglikana (Anglican Communion) izay mampifandray ny Anglikana maneran-tany ny EEM. Azo lazaina ho niorina tamin'ny taona 1864 na 1969 ny EEM.
Ny protestantisma[hanova | hanova ny fango]
Tsy ny FLM ihany no fiangonana loterana eto Madagasikara fa ao koa ireo fiangonana niforona taty aoriana vokatry ny tsy fifanarahana tao amin'ny FLM.
Ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM), dia fiangonana kristiana protestanta vokatry ny fitoriana ny Filazantsara nataon'ireo misionera avy tamin'ny Misiona Norveziana (anglisy: Norwegian Missionary Society - NMS) nanomboka ny taona 1866 sy ny Misiona Amerikana (Americana Lutheran Church - ALC) nanomboka tamin'ny taona 1888. Tao Betafo no niorina ny trano fiangonana loterana voalohany teto Madagasikara. Tamin'ny taona 1950 anefa vao nahazo fahaleovan-tena io fiangonana io ary tamin'io koa no niantsoana azy amin'ny hoe FLM.
Ireto ny tena fantatra amin'ireo fiangonana loterana niala avy ao amin'ny FLM:
- ny Fiangonana Loterana Malagasy Nohavaozina (FLMN) izay nisitaka tamin'y FLM tany amin'ireo taona 70 noho ny tsy fankasitrahana ny rafi-pitantanana fa tsy noho ny foto-pampianarana tsy mitovy; io no fiangonana loterana fantatra indrindra manaraka ny FLM. Matanjaka io fiangonana io ao amin'ny distrikan'Antanifotsy sy ao Antanarivo. Ahitana azy koa ny any Toliara sy any Mahanoro.
- ny Fiangonana Fifohazam-Panahy Loterana Malagasy (FFPLM) naorin'ilay mpiandry atao hoe Mama Olga. Ao Anolaka any Fianarantsoa no misy ny foibeny.
- ny Fiangonana Protestanta Loterana Malagasy (FPLM). Ao Ankofafa any Fianarantsoa ny misy ny foibeny.
Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM), dia niforona vokatry ny fitambaran'ny fiangonana telo notarihin'ny London Missionary Society (tonga teto tamin'ny taona 1818) ny Société des Missions Evangeliques de Paris (tonga teto tamin'ny taona 1867) ary ny Frends Foreign Missionary Association (tonga teto tamin'ny taona 1897). Mikambana amin'ny Communion Mondiale des Eglises Réformées ny FJKM. Tamin'ny taona 1968 vao nitondra io anarany io ity fiangonana ity.
- ny Fiangonana Malagasy Tranozozoro Antranobiriky (FMTA) dia fiangonana avy amin'ny London Missionary Society (LMS) tamin'ny taona 1894 izay niala noho ny tsy fifanarahana nisy tamin'ny pastora malagasy sy ny misionera anglisy izay nihevitra ny azy ireo ho mpanampy fotsiny ihany. Ny Pastora Rajaonary no nitantana an'io fiangonana voalohany.
- ny Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara (METM) dia fiangonana naorin'ny Pastora Rakotobe Andriamaro tamin’ny taona 1955. Miara-miasa amin'ny FJKM ny METM.
- ny Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara (FPVM) dia fiangonana niala avy amin'ny FJKM noho tsy fitoviam-pomba fijery ny amin'ny asam-pifohazana. Tamin'ny taona 2002 no nanorenan'ny Mpitandrina Randrianantoandro Jean Joseph.
- ny Fiangonana Kristiana Protestanta Malagasy Vavolombelona, niorina tamin'ny taona 1967.
- ny Fiangonan'ny Fifohazan'ny Mpianatry ny Tompo, niorina tamin'ny taona 1954.
- ny Fiangonan'ny Fifohazam-Panahy Malagasy, niorina tamin'ny taona1963/64.
Ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito eto Madagasikara dia fiangonana kristiana izay niorina teto Madagasikara tamin'ny taona 1927. Misionera avy ao amin'ny nosy Maorisy no nitondra ny adventisma teto Madagasikara tamin'hy taona 1910. Notokanana ary ny fiangonana voalohany tao Manjakaray ny 27 Aogositra 1927. Mihoatra ny 76 000 ny Malagasy adventista izay manana fiangonana mihoatry ny 1200.
Ny sampan'ny adventisma hafa
- ny Fiangonan'i Jehovah Tompon'ny Sabata andro faha-7 (FJTSa7)
Ny evanjelisma sy ny pentekotisma ary ny karismatika[hanova | hanova ny fango]
Betsaka ireo fiangonana niorina taorian'ireo fiangonana voalaza anarana etsy ambony izay samy mikarakara ny ara-panahin'ny Malagasy sy ny mponina eto Madagasikara ka ny ankamaroany dia ao amin'ny atao hoe evanjelisma sy ny pentekotisma ary ny karismatika. Tsy mitsaha-mitombo isa ireo fiangonana ireo. Izy ireo matetika no lazaina amin'ny anarana hoe "fiangonana zandriny".
ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara, niorina tamin'ny taona 1963.
ny Fiangonana Pentekotista Mitambatra, niorina tamin'ny taona 1970.
ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara (FAM), niorina tamin'ny taona 1996;
ny Fiainana Ao amin'i Kristy (FAK), niorina tamin'ny taona 1985.
ny Jesosy Mamonjy, niorina tamin'ny taona1963
ny Fiangonana Evanjelika Shine, niorina tamin'ny taona 2004.
ny Fiangonan’ny Ampakarina (FnA)
ny Fiangonana Mahery ny Ran'i Jesosy
ny Assemblée de Dieu na Fiangonana'Andriamanitra eto Madagasikara, niorina tamin'ny taona 1967.
ny Eglise Universelle du Royaume de Dieu, niorina tamin'ny taona 1998
ny Communauté Evangélique Indépendante de Madagascar (CEIM), niorina tamin'ny taona 1991.
ny Fahazavan'i Kristy (FAKRI), niorina tamin'ny taona 1996.
ny Centre Parole Vivante niorina tamin'ny taona 1993.
ny Communauté Evangélique du Réveil, niorina tamin'ny taona 1990.
Ny Vavolombelon'i Jehovah sy ny Olomasin'ny Andro Farany[hanova | hanova ny fango]
Ireto fiangonana roa ireto no tsy azoazon'ny ankamaroan'ny Kristiana hafa indrinra noho ny finoan'izy ireo betsaka zavatra tsy itoviany amin'ireo fiangonana mahazatra ny Malagasy. Izany no ilazan'ireo fiangonana tranainy azy ireo tsy amim-pihambahambana hoe "sekta".
Ny Vavolombelon'i Jehovah[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny 1925 no nitsidika voalohany an'i Madagasikara ny iraky ny Fikambanan'ny Vavolombelon'i Jehovah. Tamin'ny taona 1970 dia tsy neken'ny fitondram-panjakana malagasy ny fikambanan'ny Vavolombelon'i Jehovah notarihin'ireo teratany vahiny. Tamin'ny taona 1984 vao neken'ny fanjakana malagasy ny fijoroan'ny fikambanan'ny mpianatra ny Baiboly ary tamin'ny taona 1994 vao nankatoavin'ny fanjakana ny Fikambanan'ny Vavolombelon'i Jehovah eto Madagasikara. Tsy mino ny maha Andriamanitra an'i Jesoa ny Vavolombelon'i Jehovah.
Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany[hanova | hanova ny fango]
Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany, niorina tamin'ny taona 1993. Fantatry ny Malagasy amin'ny anarana hoe Fiangonana Môrmôna ity fiangonana ity. Razanaparany Ramiandrisoa no nitondra ny môrmônisma teto Madagasikara tamin'ny taona 1989. Efa Tamin'ny taona 1990 no nananganana ny fiangonana nefa tamin'ny taona 1993 vao voaorina ara-panjakana ny izany fiangonana izany ka Razanapanala Ramiandrisoa no lasa filohany. Amin'ny Olomasin'hy Andro Farany dia Andriamanitra samy hafa nefa miara-miasa ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Ireo fiangonana ao amin'ny FFKM[hanova | hanova ny fango]
Misy efatra ireo fiangonana mikambana ao amin'ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara ka ireto avy izany.
Eklesia Episkopaly Malagasy (Anglikana) (EEM), niorina tamin'ny taona 1969 na 1864
Eglizy Katolika Apostolika Romana (EKAR), niorina tamin'ny taona 1857;
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM), niorina tamin'ny taona 1968;
Fiangonana Loterana Malagasy (FLM), niorina tamin'ny taona 1950.
Ny FJKM sy ny FLM dia mikambana ao amin'ny Fiombonan'ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (FFPM) amin'ny maha fiangonana samy protestanta sady nateraky ny Reformasiona azy ireo. Ny Fiangonana anglikana (EEM) anefa tsy ao anatin'io fiombonana io sady tsy tena fantatra loatra ho Protestanta raha eto Madagasikara na dia tsy voatery ho izany ny zava-misy any ivelany (Jereo: Anglikanisma).
Ny ekiomenisma eo amin'ireo fiangonana kristiana eto Madagasikara dia ahitana ny fiaraha-mivavaka amin'ny fotoana sasantsasany eo amin'ny fiangonana maromaro, ka ny lohany amin'izany dia ireo ao amin'ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara izay fikambanan'ny Eglizy Katolika Apostolika Romana sy ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara ary ny Eklesia Episkopaly Malagasy, izay niorina tamin'ny taona 1980.
Izany ekiomenisma izany dia miseho amin'ny alalan'ny fanaovana fivavaka iraisam-pinoana amin'ny fotoana voatondro sasany. Tsy mijanona amin'ny lafiny ara-pivavahana ihany ny ekiomenisma malahasy fa miitatra amin'ny fiaraha-mikaon-doha amin'ny famahana ny olana sosialy sy ny disadisa politika misy eto Madagasikara. Endrika isehoan'ny ekiomenisma koa ny tsy famerenana manao batisa na batemy ny mpino mifindra finoana avy amin'ny fiangonana iray mankamin'ny fiangonana iray hafa samy mpiombona. Iraisany ny fiekem-pinoana ekiomenika, ny vavaka nampianarin'ny Tompo, ny hira sasany izay efa nahavitany boky (Miara-mizotra). Efa nisy koa fandikan-teny ny Baiboly niraisan'ireo fiangonana mpikambana ireo, dia ny Baiboly Dikan-teny Iombonana Eto Madagasikara (DIEM) izay ezahana vakina amlin'ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana.
Tsy dia mahazoazo ny fiombonanam-bavaka ireo fiangonana lazaina hoe "zandriny" izay lazain'ny mpino ao amin'ny fiangonana "zokiny" sasany hoe "sekta". Voailika avy hatrany sady tsy mieritreritra ny hikambana ao koa ireo fiangonana tsy mino ny maha Andriamanitra an'i Jesoa Kristy sy tsy mino ny Trinite araka ny fampianaran'ny fanekem-pinoana ekiomenika an'izany.
Tsy mbola voakasiky ny ekiomenisma amin'ny fomba lalina koa ny lafiny ara-teolojia (tenim-pinoana, foto-pampianarana, sns) izay ahitana fahasamihafam-pinoana sarotra aravina, indrindra eo amin'ny Katolika sy ny Protestanta. Ny FLM sy ny FJKM, izay samy protestanta, no afaka mampifanakaiky ny teolojiany noho ny fampianaram-pinoany tsy mifanalavitra firy vokatry ny maha samy fiangonana nateraky ny reformasiona. Tsy mboka miara-mandray eokaristia na fanasan'ny Tompo, izay marika hita maso ankoatry ny batisa na batemy sady sakramenta roa tokony hiraisan'ny fiangonana mpiombona, ny Kristiana ao amin'ny FFKM. Tsy mbola mifampiditra alitara ny mpitondra fiangonana na dia efa afaka mifampiditra trano fiangonana sy mifampindrana polipitra aza. Na dia efa misy aza ilay Baiboly DIEM dia maro ny mpitondra fivavahana mampiasa ny Baibolin'ny fiangonany amin'ny fotoana anaovana fivavahana iraisam-pinoana.
Ny kristiaisma sy ny finoana hafa eto Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
Tokotokony ho ny antasasaky ny Malagasy no manaraka ny fivavahan-drazana, araka ny tatitry ny US Department of State tamin'ny taona 2011, fa 4,5% kosa izany hoy ny Pew Research Center tamin'ny taona 2010.
Izany fivavahan-drazana izany dia mino fa andriamanitra iray ihany no nanao izao rehetra izao, izay antsoina hoe Zanahary na Andriamanitra. Fanampin'izany dia manantitra ny fifandraisan'ny velona sy ny maty (Razana) io fivavahan-drazana io. Ny fivavahanana amin'ny Razana no nitarika ho amin'ny fanamboarana fasana andaniam-bola be, fanaovana famadihana (ho an'ireo mponina afovoan-tany) izay amongarana amin'ny fomba miverimberina ireo havana efa maty mba hamonosan-dambamena vaovao azy ireo alohan'ny hamerenana azy any am-pasana indray.
Hatramin'ny fiandohan'ny fivavahana kristiana teto Madagsikara no nisian'ny fifanandrenana teo aminy sy ny fivavahan-drazana malagasy. Ny Kristiana milaza fa asan'ny devoly na asan'ny maizina ny fivavahan-drazana malagasy fa ny mpandala ny fivavahan-drazana kosa miampanga ny Kristiana ho mpanimbazimba ny zavatra navelan'ireo nahitany masoandro. Teo amin'ny tantara dia i Ranavalona I no nalaza tamin'ny fiarovana ny fivavahan-drazana manoloana ny kristianisma izay niteraka ny fanenjehana mamaivay ny mpanaraka ity farany. Rehefa maty Ranavalona I dia nahazo laka amin'izay ny fivavahana kristiana. Miseho ny fanoheran'ny Kristiana ny fivavahana amin'ny sampy, ny fivavahana amin'ny razana, ny finoana ny tromba sns, indrindra eo amin'ireo fiangonana protestanta (ao amin'ny sehatry ny fifohazana) sy evanjelika. Mandraka ankehitriny dia mahazo laka ny kristianisma ka na amin'ny sehatra politika sy fitondram-panjakana aza dia tsy mipetraka mazava ny maha fanjakana laîka an'i Madagasikara.
Matetika koa anefa ny fivavahana kristiana dia tanterahin'ny mpino sasany amin'ny fampifangaroharoana azy amin'ny fivavahan-drazana (sinkretisma).
↑ 2,0 et 2,1 "Religions in Madagascar | PEW-GRF". Globalreligiousfutures.org. Notsidihina 20/09/2017
↑ "Rhema community Church - Foudational doctrines" - Rhema community Church.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristianisma_ao_Madagasikara&oldid=980889"
Voaova farany tamin'ny 10 Martsa 2020 amin'ny 07:52 ity pejy ity.